တစ်ပတ်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး သတင်းများ။ – SoShwe
Home/Entertainment/တစ်ပတ်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး သတင်းများ။
တစ်ပတ်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး သတင်းများ။
Pete Davidson ဟာ Ariana Grandeနဲ့ လမ်းခွဲအပြီး Comedy Show တွေ ပိုလုပ်လာ။
အသက်၂၅နှစ်အရွယ် ဟာသသရုပ်ဆောင်ဟာ သူနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟာသစကားပြောအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွေမှာ ဖော်ပြခံလာရပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၁ရက်နေ့ နယူးယောက်မြို့ ဘရွန့်ကလင်က Bell House မှာကျင်းပတဲ့ Comedy Show မှာဆိုရင် Pete က ” ကျွန်တော်နဲ့ တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတော်တော်များများက ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပျက်သွားကြပုံပဲ . . . ” လို့ အစချီပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ဘာကြောင့်ကွဲသွားရတယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ” On The List ” အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေက Ariana ရဲ့ လမ်းခွဲသီချင်း ”7Rings ” နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
ကလေးမွေးပြီးနောက် Cardi B ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲလာမှု။
သီချင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်း လူကြိုက်အများဆုံးစာရင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာနားမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ Cardi B ဟာ သူမရဲ့ သမီးဦးလေးကို မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း သူမရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားမှုများကို အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ တင်ထားတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူမဟာပုံမှန်အတိုင်း ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်လာပြီလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ” On The List ” အစီအစဉ်မှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေက Cardi B ဟာ ကလေးမွေးပြီး သူမရဲ့ ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်ရလာပြီဖြစ်လို့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ အဆိုတော် Offset နဲ့ ပြန်ပြီးပေါင်းဖက် နိုင်ပါတယ်လို့လည်း သူတို့ရဲ့အထင်ကို ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
မြို့စားကတော် Meghan အပေါ် Anna Wintour ရဲ့အမြင်။
Vogue မဂ္ဂဇင်းရဲ့အယ်ဒီတာချုပ် Anna ဟာ Vouge က တာဝန်ယူစီစဉ်တဲ့ ” Ask Anna ” ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ Meghan ရဲ့ တော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ အပြင်အဆင်ကိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပြီး Meghan ရဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာတွေဟာ ဖက်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းကို ဘယ်လောက် ဂယက်ရိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ” On The List ” အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သူတွေက Harry နဲ့ Meghan တို့နှစ်ဦး အိမ်အသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီစဉ်နေကြောင်းကိုလည်းပြောပြသွားပါသေးတယ်။
Previous အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့စား Harry နဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်မြို့စားကတော် Meghan တို့ဟာ ချစ်သူများနေ့ကို အတူတူဖြတ်သန်းနိုင်ဖွယ်မရှိ။
Next Donald Trump ??? ????????????????? Tom Brady ??? ?????????????? ???????????????? Daniel Radcliffe